Marbra amin'ny fiainana
Ny fampiasana fitaovan'ny habakabaka dia miteraka tsy tapaka ny vaovao, ary ireo fitaovam-pananganana isan-karazany dia niditra tsikelikely tamin'ny fahitanay. Ny hatsaran'ny marbra dia tsy nihena hatramin'ny andro taloha. Ny marbra ny rivo-piainana mendri-kaja dia mihaingo, toy ny zavakanto lasa natiora ihany, dia afaka mifangaro amin'ny akanjo an-trano iray manontolovoajanahary ao, asehoy madio sy vaovao ary afaka amin'ny hatsaran-tarehy maloto.
Misafidiana marbra hanaovana rindrina fametrahana TV, afaka mampiroborobo eo noho eo ny sokajy efitrano fandraisam-bahiny iray manontolo. Misy lamina tsotra sy malefaka hanasongadinana ny fahatsapana hierarchy, misy ihany koa ny lalan-dra kaleidoscopic hitondra fiatraikany amin'ny fahitana matanjaka.
Ny lakozia sy ny trano fisakafoanana no fofona afon'ny olona indrindra ao an-toerana, ny zoron-trano rehetra dia feno ny tsiro ao an-trano. Miaraka amin'ny marbra hamongorana ny fomba habakabaka, hamoronana rivo-pisakafoanana mendri-kaja sy tantaram-pitiavana, dia miseho ny lamaody tanora mihamaro hatrany, feno tanjaka.
Ny firafitry ny marbra miaraka amina endrika hafa amin'ny tany fotsy dia mitovy amin'ny marika ranomainty mikoriana, izay toy ny voam-boahary, mahatonga ny marbra hanome karazana fahatsapana hatsarana voajanahary.
Ny fandroana marbra, ireo izay mahatratra ny mason'izy ireo dia fahatsapana tsotra lafo vidy.
Ny marbra sarobidy sy lafo vidy miaraka amin'ny firafitra voajanahary sy ny soritry ny fotoana. Raha te haingo bebe kokoa ianao dia afaka misafidy marbra ho an'ny haingon-trano.